विश्वभर करीब १ अर्ब ६७ करोड वेबसाइट, प्रत्येक मिनेटमा विश्वभर ३८० वेबसाइट बन्ने गर्दछ – Financial News
विश्वभर करीब १ अर्ब ६७ करोड वेबसाइट, प्रत्येक मिनेटमा विश्वभर ३८० वेबसाइट बन्ने गर्दछ
June 3, 2019 Financial Notices0Comments
तपाईं दैनिक कतिओटा वेबसाइट भ्रमण गर्नुहुन्छ ? आफ्नो काम, रुचि र आवश्यकताअनुसार तपाईं पक्कै पनि कुनै न कुनै वेबसाइट खोल्नुहुन्छ । आफ्नै वेबसाइट छ भने त्यसलाई पनि समय दिनुहुन्छ होला । इन्टरनेट सम्बद्ध काम नै नहुनेहरूले पनि आजभोलि दैनिक विश्व घटना, सूचना तथा समाचार थाहा पाउन सञ्चारमाध्यमका वेबसाइट खोल्ने गर्छन् ।
विश्वका ५६ दशमलव १ प्रतिशत मानिस इन्टरनेटको प्रयोग गर्छन् । दिनप्रतिदिन यसको पहुँच र प्रयोग पनि बढ्दै गएको छ । यससँगै वेबसाइट प्रयोगकर्ताको संख्या पनि बढेको छ ।
गत जनवरीको एक तथ्यांकअनुसार विश्वभर १ अर्ब ५१ करोड ८२ लाख वेबसाइट थिए । अहिले यो संख्या बढेर १ अर्ब ६७ करोड ८० लाखको हाराहारीमा पुगेको अनुमान गरिएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी नेटक्राफ्टका अनुसार सन् २०१४ को सेप्टेम्बरमा विश्वमा वेबसाइटको संख्या पहिलोपटक १ अर्ब पार भएको थियो । सन् २०१७ मा यो संख्या बढेर १ अर्ब ७५ करोड नाघेको थियो । गतवर्ष भने वेबसाइटको संख्या केही घटेको थियो ।
वेबसाइटको शुरुआत सन् १९९१ देखि भएको हो । डेढ अर्बभन्दा बढी वेबसाइट भए पनि सबै वेबसाइट सक्रिय भने छैनन् । ८५ प्रतिशत भन्दा बढी वेबसाइट सक्रिय छैनन्, अर्थात् अहिले १० देखि १५ प्रतिशत वेबसाइट मात्र सक्रिय छन् । यसमा पनि धेरैजसो वेबसाइटमा नियमित अपडेट हुँदैन । यसले वेबसाइट र सक्रिय वेबसाइटबीचको अन्तर धेरै देखाएको छ । यसको मतलब वास्तवमा सक्रिय वेबसाइट निकै कम छन् ।
पछिल्लो उपलब्ध भएको तथ्यांकअनुसार विश्वभर करीब ३ अर्ब ५८ करोड इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन् । सबैभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ता चीनमा छन् । चीनमा १ अर्बभन्दा बढी मानिसले इन्टरनेटको प्रयोग गर्छन् । चीनको समग्र जनसंख्याको तुलनामा यो २५ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।
विश्वको पहिलो वेबसाइट
अहिले विश्वमा १ अर्बभन्दा बढी वेबसाइट छन् । तर यसको शुरुआत एउटा वेबसाइटबाट भएको थियो । सन् १९९१ अगस्ट ६ मा पहिलो वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । यो वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट थियो । यसमा केही सामान्य जानकारीका साथै हाइपरटेक्स अनुसारको इन्स्ट्रक्शन थियो । साथै वेबसाइट बनाउने केही गाइडलाइन थियो ।
गुगलमा कति वेबसाइट छन् ?
सर्च इन्जिन गुगलले व्यक्तिगत वेबपेजमा बढी ध्यान दिने गरेको छ । तर वेबसाइटमा भने उसले खासै धेरै ध्यान दिएको छैन । गुगलको लक्ष्य मानिसलाई आवश्यकताअनुसारको सूचना प्रदान गर्नु हो । त्यसैले वेबसाइटभन्दा पनि वेबपेजमा गुगलले ध्यान दिने गरेको हो । त्यसैले गुगल इन्डेक्समा रहेको तथ्यांक विश्वसनीय हुँदैन । गुगल इन्डेक्सका अनुसार अहिले कम्तीमा ४ अर्ब ४५ करोडभन्दा बढी वेबपेज छन् । यो संख्या अहिले रहेका वेबसाइटको भन्दा धेरै बढी हो । एउटै वेबसाइटमा सयौं वा हजारौंको संख्यामा वेबपेज राख्न सकिन्छ ।
दैनिक कति वेबसाइट बन्छन् ?
यो प्रश्नको उत्तरमा विश्वसनीय तथ्यांक पाइँदैन । तर एक अध्ययनले प्रत्येक मिनेटमा विश्वभर ३८० वेबसाइट बन्ने गरेको देखाएको छ । यसको अर्थ विश्वभर १ दिनमा ५ लाख ४७ हजार २ सय वेबसाइट बन्ने गर्छन् । प्रत्येक दिन इन्टरनेटबाट वेबपेजका केही भाग हराउने गर्छन् । यसकारण वास्तवमा निर्माण हुने वेबसाइटको संख्या भने केही कम हुन्छ । प्रत्येक दिन उल्लेख्य मात्रामा वेबसाइट डिलिट पनि हुने गर्छन् । त्यसैले यो वास्तविक वृद्धि भने होइन ।
सबैभन्दा बढी भ्रमण हुने वेबसाइट
एमजनको एलेक्साको वरीयता हेर्ने हो भने गुगल अहिले सबैभन्दा बढी भ्रमण हुने साइट हो । धेरैजसो मुलुकमा गुगल शीर्षस्थानमा रहने गरेको छ । तर चीन, रूसजस्ता मुलुकमा भने गुगलभन्दा अन्य वेबसाइट धेरै भ्रमण हुन्छ ।
अंग्रेजी भाषाका वेबसाइट कति ?
विश्वभर ७ हजारभन्दा बढी भाषा छन् । त्यसमध्ये २ सयभन्दा बढीको अस्तित्व इन्टरनेटमा छ । त्यसमध्ये ५१ दशमलव ५ प्रतिशत वेबसाइट अंग्रेजी भाषामा छन् । यसैगरी रूसी र जर्मन भाषामा समान ५ दशमलव ७ प्रतिशत वेबसाइट छन् भने जापानी र स्पेनिस भाषाका समान ५ दशलमव १ र फ्रेन्च भाषाका ४ दशमलव १ प्रतिशत वेबसाइट छन् । अन्य भाषाका वेबसाइट २१ दशमलव ८ प्रतिशत छन् ।
इन्टरनेटमा कति सूचना छन् ?
इन्टरनेटमा कति सूचना छन् भन्ने यकिन गर्न निकै कठिन छ । प्रत्येक सेकेन्ड इन्टरनेटमा उल्लेख्य मात्रामा सूचना परिवर्तन हुने गर्छ । सन् २०१९ मा साविकको वृद्धिको आधारमा विश्वको इन्टरनेट ट्राफिक २ जेटाबाइट अर्थात् २ अर्ब अर्ब बाइट पुग्न सक्छ । १ जेटाबाइटमा ३६ हजार घण्टाको एचडी भिडियो अटाउन सक्छ ।
चिरञ्जीवी आचार्य , Aarthik Abhiyan
Previous page Previous post: नेपालमा बैंकका CEO को कमाइ दुई करोड भन्दा माथि सम्म, कुन CEO को तलब कति ?
Next page Next post: बजेट मार्फत करको दायरालाई व्यापक परिवर्तन : अब के-केमा लाग्ने भयो कर
बैंकरको स्वार्थ, संस्कार र बैंकिङ कसुरः
एटीएम ह्याक कहाँबाट गरियो भन्ने पत्तै लागेन
How AI is Changing the Financial Services Industry
How Banks Can Use AI to Give Businesses the Control They Desire